Maurizio Sarri Oo Saadaaliyay Qaabka Loogu Kala Dagaalami Doono Kaalmaha Sare E Premier league Iyo Hadal Uu Kaga Qoslinaya Jamaahiirta Man City. - GOOL24.NET
Maurizio Sarri Oo Saadaaliyay Qaabka Loogu Kala Dagaalami Doono Kaalmaha Sare E Premier league Iyo Hadal Uu Kaga Qoslinaya Jamaahiirta Man City.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa ka farxiyay jamaahiirta Manchester City kadib markii uu qirtay in kooxdiisa Blues ayna u xoganayn sida Man City si ay koobka Premier league ugula tartamaan isaga oo irtay in kooxda Guardiola ay ka horayso kooxdiisa aan wali guuldaraysan ee Chelsea.
Dhnaca kale Sarri ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka loogu kala dagaalami doono kaalmaha sare ee Premier league isaga oo muujiyay in kooxaha Man City iyo Liverpool ay hubaal tahay in ay kaalmaha sare ku dhamaysan doonaan balse ay kooxdiisa Chelsea, Arsenal, Tottenham iyo Man United ay kaalmaha kale ku dagaalami doonaan.
Chelsea ayaa 4 dhibcood ka hoosaysa Manchester City oo hogaanka Premier league haysa laakiin haddaba waxa uu Maurizio Sarri qirtay in kooxdiisa Chelsea ayna u xoog badnayn sida kooxda Guardiola ee Manchester City.
Chelsea ayaa caawa marti u noqon doonta kooxda ay London ka wada dhisan yihiin ee Tottenham iyada oo Blues rajaynaysa in ay sii joogtayso dagaalka ay kula jirto kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo ah labada kooxood ee ka horeeya.
Xili ciyaareedkii hore Chelsea waxay ku dhamaysatay meel ka baxsan afarta kaalmood ee sare iyada oo seegtay UEFA Champions League balse waxaa la yaab lahaa in Blues ay xili ciyaareedkii hore dhamaysatay iyada oo 30 dhibcood ka hoosaysay Man City oo 100 dhibcood koobka Premier league ku qaaday.
Maurizio Sarri oo ka hadlaya in kooxdiisu ay waajib ku tahay in ay tartanto balse ayna Man City soo qaban karin ayaa yidhi: “Waxaa waajib nagu ah in aanu samayno, waanu ka soo kabsan karnaa, LAAKIIN anigu ma filayo in xili ciyaareedka ugu horeeya aanu ka soo kabsan karno 30 kii dhibcood”.
Laakiin Sarri oo aan si gabasho lahayn u qiraya in Manchester City ay ka sarayso kooxaha kale isla markaana sii xoogan uga farxinaya jamaahiirta Man City ayaa yidhi: “Premier league waxaa ka jirta koox ka saraysa kuwa kale, kooxdani waa Manchester City”.
Intaa kadib Sarri ayaa ka hadlay in kooxda kale ee aadka u fiicani ay tahay Liverpool oo uu hubaal ka dhigay in ay kaalmaha hore ku dhamaysan doonto wuxuuna yidhi: “Kadib waxaa jirta koox aad u fiican waana Liverpool. Waxaa hubaal ah in Liverpool ay ku jiri doonto afarta boos ee ugu horeeya”.
Laakiin Maurizio Sarri ayaa qiray in ay jiri doonaan afar kooxood oo aan ahayn Man City iyo Liverpool oo kaalmaha kale ku dagaalami doona waana kooxdiisa Chelsea, Arsenal, Man United iyo Tottenham.
Sarri oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Kadib waxaa jira afar kooxood ama shan kooxood kuwaas oo u dagaalami doona booska Champions League, waana Chelsea, Arsenal, Tottenham iyo Man United”.
Waxaa hadalka Sarri si buuxda looga fahmay in Manchester City ay tahay kooxda aan wali laga qaadi karin koobka Premier league isla markaana ay Liverpool tahay kooxda ku soo xigta ee la sii tartami karta balse ay kooxdiisa Chelsea la loolami doonto Arsenal, Tottenham iyo Man United ee u soo bixitaanka Champions league.